Tantara: Teo Amin’ny Tendrombohitra Oliva - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
I JESOSY io eo amin’ny Tendrombohitra Oliva io. Ireo lehilahy efatra miaraka aminy dia apostoliny. I Andrea sy Petera mpirahalahy, ary koa i Jakoba sy Jaona mpirahalahy ireo. Ny tempolin’Andriamanitra ao Jerosalema no hitanao erỳ lavidavitra.
Roa andro izay no lasa hatramin’ny nitaingenan’i Jesosy zana-boriky niditra tao Jerosalema. Talata izao. Teo amin’ny ﬁandohan’ny andro dia tao amin’ny tempoly i Jesosy. Tao ny mpisorona dia nitady hihazona azy mba hamono azy. Nefa natahotra ny hanao izany izy ireo satria tian’ny olona i Jesosy.
‘Ry bibilava, taranaky ny menarana!’ Izany no niantsoan’i Jesosy an’ireo ﬁloha ara-pivavahana. Avy eo dia nilaza i Jesosy fa hanasazy azy ireo Andriamanitra noho ny zava-dratsy rehetra nataony. Taorian’izany dia tonga teo amin’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy, ary nanomboka nametraka fanontaniana taminy ireo apostoly efatra ireo. Fantatrao ve izay nanontaniany an’i Jesosy?
Nanontany zavatra momba ny hoavy ny apostoly. Fantany fa hamarana ny faharatsiana rehetra eto an-tany i Jesosy. Nefa niriny ny hahalala hoe rahoviana no hitranga izany. Rahoviana i Jesosy no ho tonga indray hanapaka amin’ny maha Mpanjaka?
Fantatr’i Jesosy fa tsy ho afaka hahita azy ireo mpanara-dia azy eto an-tany rehefa ho tonga indray izy. Ny antony dia satria any an-danitra izy amin’izay, ary tsy ho afaka hahita azy any izy ireo. Koa nolazain’i Jesosy tamin’ny apostoliny ny sasany amin’ireo zavatra hitranga eto an-tany rehefa hanapaka amin’ny maha Mpanjaka any an-danitra izy. Inona ny sasany amin’ireo zavatra ireo?
Nilaza i Jesosy fa hisy ady lehibe, olona maro no harary sy ho noana, ary hisy horohoron-tany lehibe. Nilaza koa i Jesosy fa hotorina manerana ny tany ny vaovao tsara momba ny fanjakan’Andriamanitra. Hitantsika mitranga amin’ny androntsika ve ireo zavatra ireo? Eny! Ary afaka matoky isika fa manapaka any an-danitra i Jesosy ankehitriny. Tsy ho ela dia hamarana ny faharatsiana rehetra eto an-tany izy.
Matio 21:46; 23:1-39; 24:1-14; Marka 13:3-10.
Asehon’ny Baiboly fa mety ny mampiasa anaram-boninahitra tsy ara-pivavahana. Inona anefa no asehon’ny tenin’i Jesosy ao amin’ny Matio 23:8-11 momba ny fampiasana anaram-boninahitra, eo anivon’ny ﬁangonana kristianina? (Asa. 26:25; Rom. 13:7; 1 Pet. 2:13, 14)
Inona no nataon’ny Fariseo, mba hisakanana ny olona tsy ho tonga Kristianina, ary inona no zavatra mitovy amin’izany ataon’ny mpitondra ﬁvavahana ankehitriny? (Matio 23:13; Lioka 11:52; Jaona 9:22; 12:42; 1 Tes. 2:16)
Nangataka Famantarana ny Apostoly
Tanteraka voalohany ny faminaniany, tamin’​ny taonjato voalohany. Mbola ho tanteraka amin’ny ambaratonga lehibe kokoa ve izy io atỳ aoriana?
Efa Akaiky ve ny Fara Andro?
Jereo ato ny famantarana efatra resahin’ny Baiboly, dia ho hitanao ny valiny.